Cherechedza madzimai, ndapota fomani imwe faira yefaira paDhobho kibhodha nokuda kwekubvumira kwako kworudo! (yakagadzirwa) - NYE kuverengwa kweJs, Vjs, Nightclubs 2019
Cherechedza madzimai, ndapota fomani imwe faira yefaira paDhobho kibhodha nokuda kwekubvumira kwako kworudo! (yakagadzirwa)
(muenzaniso kubva kuBeyonce) Vose vasikana vari vaviri vanoita ruzha! (yakagadzirwa)
(Muenzaniso kubva paKuvhara Hako Dzako) Uhhhhh ... Haisi iyo chikwata chenyasha. Hapana kubvisa kubvumirwa! (Yakagadzirwa)